RW Soomaaliya iyo Islaan Bashiir oo Gaalkacyo ku kulmay – Radio Daljir
RW Soomaaliya iyo Islaan Bashiir oo Gaalkacyo ku kulmay
Luulyo 20, 2015 2:58 b 0
Isniin, Luuliyo 20, 2015 (Daljir) — Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federalka Soomaaliya Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo ka kooban labadda Gole ee dowladda, la-taliyayaal iyo masuuliyiin ka tirsan Maamulka Puntland oo safar dhanka dhulka ah maanta duhurkii uga soo ambabaxay magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa gaaray magaalooyinka Burtinle iyo Gaalkacyo.
Ra’iisul Wasaaraha XFS ayaa waxa uu kulan kula yeeshay maamulka, waxgaradka iyo isimo ku sugnaa xarunta maamulka degmada Burtinle ka hor inta uusan tagin magaal madaxda gobolka Mudug ee Gaalkacyo. Waxuuna R/Wasaaruhu warbixin dheer ka siiyey xaaladda deegaanadii uu soo maray iyo kulamadii ka dhacay Magaalada Garowe ee wadatashiga ahaa.
Xildhibaan Yaasiin Cabdi Seed oo ka mid ah xubnaha Baarlamanka Federalka Soomaaliya oo ku soo dhaweeyay Ra’iisul Wasaare Sharma’arke degmada Burtinle ayaa ugu baaqay shacabka magaalada Burtinle in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan midnimada Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay shacabka degmada Burtinle gobolka Nugaal, isagoo balan qaaday dowladda Soomaaliya in mar walba ay ka shaqayn doonto horumarka dadka Soomaaliya, si looga gudbo marxaladihii dalka iyo dadku soo mareen muddooyinkii dambe.
“Xukuumadda Soomaaliya waxay idin kala shaqayn doontaa horumarka aad gaarteen sidii aad usii ballaarin lahaydeen, waxaan booqday meelo kala duwan oo kamid ah Puntland oo soo dhageystay dadka aragtidooda anigoo la tashi la sameeyey hoggaanka Puntland mudadii aan joogay Garowe”ayuu yiri R/Wasaare Cumar.
“Ujeedka aan ka leenahay booqashadan waa in Xukuumadda iyo dadkeedu wadatashadaan, waad la socotaan waxaa dib u habayn lagu sameynayaa Dastuurkii KMG ahaa iyo shuruucdii kale ee dalka, waana sii wada doonnaa la tashiga dadkeena. Tallooyinkii aad soo jeediseen runtii waxay ahaayeen kuwa wax ku ool ah, balse waxaan idiin balan qaadaynaa in Xukuumaddu qaadan doonto tallooyinka aad soo jeediseen ficilna u badali doonto” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaruhu.
Qaar kamid ah Odayaasha deegaanka iyo Maamulka degmada ayaa uga mahadceliyey R/Wasaaraha booqashadiisa, waxana ay warbixin ka siiyeen xaaladda Amni, Dhaqaale iyo Siyaadadeed ee degmada Burtinle, iyagoo balan qaadey in dowladda Soomaaliya ay kala shaqaynayaan wax walba oo danta qaranku ay ku jirto.
Dhanka kale. Ra’iisul Wasaaraha ayaa caawa gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, wuxuna la kulmay Islaan Bashiir Islaam Cabdulle oo kamid ah isimada Puntland, wuxuna sii wadi doonaa kulamada kala duwan ee uu la leeyahay shacabka Mudug si loo dhageysto aragtidooda.
Booqashada uu maanta ku tagey Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid magaalooyinka Gaalkacyo iyo Burtinle ee gobollada Mudug iyo Nugaal ayaa qayb ka noqonaya booqashooyin qaatay hal asbuuc oo Ra’iisul Wasaaruhu ku dhageysanayay madaxda iyo Shacabka Puntland.
Islaan Bashiir oo kamid ah hogaanka dhaqanka Soomaalida ayey ra\_’iisul wasaaraha ka wada wada hadleen arimo ku aadan xaaladda guud ee Soomaaliya iyo sidii dalka nabad loogu soo dabaali lahaa ,waxaana Islaanku uu u duceeyay umadda Soomaailyeed.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Isniin _20
Dowladda Denmark oo Qaxooti ku sugan dalkeeda dib ugu soo celinaysa Soomaaliya